Sidee loo hagaajiyaa nidaamyada hawlgalka GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Codsiyada lagu hagaajinayo GNU / Linux
Tayaynta, ama si gaar ah u hagaajinta Nidaamkeenna Howlgalka waa in la hagaajiyo waxqabad isku mid ah, laga bilaabo garashada isbeddello macquul ah (softiweer) ama mid jireed (qalab). Marka laga hadlayo isbeddelada qalabka, Nidaamka Howlgalka waxaa looga faa’iideysan karaa cusbooneysiinta ama kordhinta Hard Disk Space, RAM Memory, CPU Type, iyo waxyaabo kale.
Xaaladda ina khuseysa daabacaddan, talooyinka ama talooyinka waxay noqon doonaan heer macquul ah, sida isticmaalka codsiyada ama fulinta ficilada farsamada ee noo oggolaanaya inaan ku ilaalino heer sare oo waxqabad iyo hawlgal ah Nidaamkeenna Hawlgalka eber qiime.
1 Ku-hagaaji isticmaalka Terminal
1.1 Preload iyo Prelink
1.2 Deborphan iyo Localepurge
1.3 Dejinta Terminalka
2 Heerka codsiyada garaafka
Ku-hagaaji isticmaalka Terminal
Kuwa jecel Terminal-ka iyo qoraalka qorsheysan waxaa u furan ikhtiyaarro sidan oo kale ah: «Sidee loo sameeyaa Dayactirka GNU / Linux iyadoo la adeegsanayo qoraal? y Sidee loo sameeyaa Xog Xog ah oo ku jirta Qalabka adoo adeegsanaya qoraalka Shell? taasoo aan beryahan ka hadalnay. Tusaalayaashan 2 waxay daboolayaan dhinacyada aasaasiga ah si aan u ilaalino Nidaamyadeena Howlgalka oo casriyeysan, kuwaas oo ah in la cusbooneysiiyo Nidaamkeenna Howlgalka oo ka madax bannaan qashinka dhijitaalka ah iyo in xogta lagu martigeliyey ay ahaato mid sugan.
Si kastaba ha noqotee, garashada Hawlahan gacanta ama otomatigga ah ayaa had iyo jeer lagu kabi karaa rakibidda xirmooyinka qaar ama hagaajinta walxaha qaarkood si loo kordhiyo heerka waxtarka, xasilloonida iyo / ama amniga OS Tusaale wanaagsan oo ah in la istixgeliyo adeegsiga codsiyada ayaa noqon kara rakibidda iyo qaabeynta xirmooyinka »Preload» iyo »Prelink« oo lagu daray baakado »Deborphan» iyo »Localepurge«.
Preload iyo Prelink
Horey usoco waa codsi terminal in wuxuu falanqeeyaa barnaamijyada ugu badan ee la isticmaalo, oo horay loogu sii rakibo xusuusta RAM ee qalabka sidaasna yareyneysa waqtigaaga bilowga ah marka aad socodsiineyso. Halka isku xidhka hore sidoo kale waa app terminal laakiin taasi waxay mas'uul ka tahay xawaareynta dhaqdhaqaaqa firfircoon ee maktabadaha OS iyo codsiyada muhiimka ah.
Iyada oo labadan codsi la wadaago, wax ka beddelka Nidaamkeenna GNU / Linux waa mid aad u fudud.
Deborphan iyo Localepurge
Deborphan waa utility ka hela xirmooyinka "agoonta" nidaamkayaga hawlgalka. Aynu xusuusnaano in xirmadu ay ku jirto xaalad «agoon» ah markii la tirtirayo xirmada waalidka (xirmo dadka kale si toos ah ugu xirxiraya), ayaa lagu yiri xirmo "cunug" ayaa weli lagu rakibay diskiga iyada oo aan la isticmaalin, iyadoo la fadhiisanayo meel aan waxtar lahayn.
Deborphan ayaa go'aamisa xirmooyinka aan haysan kuwa kale waxay kuxirantahay rakibidaada, waxayna ku tusaysaa liiska xirmooyinkaan. Adeegiisa ugu weyn wuxuu raadinayaa maktabado, laakiin waxaa loo isticmaali karaa xirmooyinka dhammaan qaybaha.
Adeegsiga horumarsan ee Deborphan waxaa lagu hirgelin karaa iyadoo la adeegsanayo qadka amarka soo socda:
Iyadoo Localpurge waa utility tirtiraya dhamaan buugta iyo caawimaadda ku jirta luqad aan ahayn kuwa lagu qaabeeyey dhexdeeda Nidaamka Hawlgalka.
Kani waa mid aad waxtar u leh maadaama tiro badan oo codsiyo ah ay rakibayaan buug gacmeedyo iyo caawimaad, luuqadahayada isdaba jooga ah (Isbaanishka iyo Ingriiska), iyo waliba luuqadaha kale ee sida xaqiiqada ah aanan u isticmaali doonin. Tani mustaqbalka fog, waxay u egtahay inay qaadato boosas badan oo ku saabsan wadistayada adag, oo leh xog aan waligeen isticmaali doonin.
Labadan barnaamij ee kale waxay noo fududeynayaan inaan hagaajino Nidaamkeena Howlgalka GNU / Linux.
Wax ka beddelka lagu dari karo waxaa ka mid noqon kara:
Isticmaal, marka laga reebo xididka isticmaalaha weyn, isticmaale maamuleyacni isticmaale leh rukhsad rujin loo qaabeeyey inuu isticmaalo amarka sudo, iyo isticmaalaha caadiga ah ee isticmaale kasta inaad gasho kumbuyuutarka si aad u isticmaasho.
Isticmaal qoraalka qoraalka dhacdada, oo diiwaan geliya amar kasta oo lagu qoro qunsulka ama terminalka si loo haayo diiwaan lagu kalsoonaan karo oo la xisaabin karo amar kasta oo lagu qoro. Waxaan ku sii sharxi doonaa tan boostada mustaqbalka.
Hayso qiyamka saxda ah taariikhda iyo waqtiga BIOS iyo Nidaamka Howlgalka.
Hubi in qaabeynta saxda ah ee faylasha »isdhaafsiga«, »resolv.conf«, »NetworkManager.conf» iyo »sources.list«
Heerka codsiyada garaafka
Heerkaan waxaa jira codsiyo badan oo wanaagsan oo lagula talin karo laakiin si aan liisku u weyneyn waxaan ku talin karnaa qaar sida:
Bleachbit waa yutiilitifile utility oo shaqadiisa ugu weyni tahay in la banneeyo booskeena diskkeena adag, aadna ugu badan qaabka caanka ah ee "ccleaner"-ka caanka ku ah Windows. Iyo sida »ccleaner«, waxay noo ogolaaneysaa inaan tirtirno feylasha, yareynta fursadaha soo kabashadooda.
Tani waxay si hufan u ilaalinaysaa asturnaantayada iyo amniga, taas oo noo oggolaaneysa inaan si wax ku ool ah u kordhinno booskeenna aragti ahaan bilaashka ah ee ku yaal diskigeenna, taasoo dammaanad ka qaadaysa in dhinac saddexaad uusan waligiis soo kaban karin xogta ama ugu yaraan si fudud.
Codsiyada kale ee aadka u wanaagsan ee qaabkani waa: Gawaarida, Stacer y Nadiifiye.
Waa adeeg bixiye garaaf ah oo fududeynaya soo bandhigida muuqaalka ah ee macluumaadka ku saabsan isticmaalka boosaska ku jira darawalada adag, sida boqolleyda isticmaalka, booska bilaashka ah, cabbirka hagaha iyo faylasha OS-ga. Baobab wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado isbeddelada darawalada adag waqtiga dhabta ah isla markaana uu falanqeeyo iyadoon loo eegin inay fog yihiin ama ay yihiin unugyo maxalli ah, iyo xarumaha kale. Waxaa lagu rakibi karaa iyada oo loo marayo qunsul ka mid ah meelaha ugu badan ee lagu keydiyo Distros.
Codsiyada la midka ah Baobab ee la fulin karo: Iftiinka faylka, JDiskReport, QDirStat y k4dirstat.
Waa nooc qalab ah oo u oggolaanaya dayactirka (nadiifinta) faylasha aan loo baahnayn ama xad-dhaafka ah ee ku jira Nidaamka Howlgalka. Waxaa ku jira isdhexgalka 'GTK + Graphical Interface', oo lagu daray isugeyn xariiq amar ah. All si ay si hufan u soo ceshano meel disk ah. Waxaa lagu rakibi karaa iyada oo loo marayo qunsul ka mid ah meelaha ugu badan ee lagu keydiyo Distros. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay tirtirto xirmooyinka oo ay hesho waxyaabaha sida:
Nuqul faylasha ah
Magacyada faylka ee dhibaatada leh
Faylasha ku meel gaarka ah
Xiriirada isku midka ah ee burburay ama dhacay.
Codsiyada la midka ah FSLint ee la fulin karo: Soosaarayaasha Faylka Nuqul y GDuplicateFinder.
Haddii aad taqaanid kuwa kale oo naga caawin kara, faallo ka bixi! Inta soo hartay waxaan rajeynayaa in qodobkaan sidii caadada inoo ahayd uu naga wada caawiyo inaan ka dhigno nidaamkeena GNU / Linux Systems mid la mid ah ama ka fiican midka kale ee lahaanshaha! Ilaa qoraalka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo hagaajiyaa nidaamyada hawlgalka GNU / Linux?
Waqtiyadaas aan ku dhex wareegayay Linux =)
Salaan kadib, waxaan ku isticmaali jiray nidaamka 'BleachBit' nidaamkeyga Linux Mint 19.2 runtiina si fiican ayey aniga ila shaqeysay, way fududahay in la rakibo oo la isticmaalo pro waa inaad ka taxaddartaa marka aad u isticmaaleyso qaabka Root, maadaama wixii la tirtiray uu lumay weligiis . halkaa laga bilaabo aad bay u wanaagsan tahay
Ku jawaab Hector Elizalde
Bawlos siidayn dijo
Qoraal fiican, laakiin kuma talin lahaa in la isticmaalo Dephorban iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha la soo sheegay, ugu yaraan maahan qof aan khibrad u lahayn (sida aniga oo kale). Taasi waxay khaldantay kumbuyuutarka iyo jiirka markii aan galayay desktop-ka, sidaa darteed waa inaan dib u rakibo oo dhan xserver-xorg ... Ma jiraan wax halis ah, laakiin waxaan ku qaatay dhowr saacadood oo wanaagsan baaritaanka sida loo hagaajiyo. Farxad
Jawaab Pablo Letelier
Salaan, Pablo. Xaqiiqdii Deborphan waa amar taxaddar leh, maadaama, haddii aadan khibrad lahayn oo aad aqbasho tirtirka waxa Deborpahn uu codsan karo in la tirtiro, dhibaatooyinka sida kuwa aad soo sheegto ayaa soo bixi kara, wax badan ayaan ku qaatay bilowga amarkaas.
Nooca cusub ee Recalbox 18.06.27 ayaa hadda la heli karaa